Madaxweynaha Puntland oo u ambabaxay Imaaraadka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Safarkiisii ugu horeeyey tan iyo markii la doortay waxa uu Maanta ugu ambabaxay Wadanka isutaga Imaaraadka Carabta.
Markii uu tago Imaaraadka Carabta ayaa madaxweyne Deni waxa uu kulan la qaadan doonaa Madaxda dalkaas iyo Shirkadda DP World ee Maamusha Dekadda Magalada Boosaaso.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa la hadal haayay safarka uu Imaaraadka ku tagayo Madaxweynaha Puntland, iyada oo Imaaraadka iyo Puntland uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan,isla markaana Puntland ay ka fuliyaan mashaariic kala duwan.
Sidoo kale warar soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweyne Deni uu tegi doono Wadanka Shiinaha,isla markaana uu heshiisyo la soo saxiixan doono Shirkado Shiinees ah oo mashaariic ka fulinaya Puntland.